युगसम्बाद साप्ताहिक - कामै नगरी भुक्तानी भ्रष्टाचार होइन र ?
Thursday, 05.28.2020, 02:30am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 04.16.2019, 01:35pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । देशका ठूला विकास आयोजना हुन् वा अन्य सरकारी काम सबैमा काम कसरी सुलभ, र छिटो सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न बढी हुने गरेको छ । आज विकास आयोजनाहरुको अवस्था हेर्दा लाग्दछ ती आयोजनाहरु जनताका लागि हुन् कि केही मुट्ठीभरका मानिसको समृद्धिका लागि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मेलम्चीदेखि सिक्टा सिंचाई आयोजनासम्मको काममा भएको ढिलासुस्ती, बढेको लागत र लम्बिएको समयले यस्तै देखाउँछ ।
विना कुनै सोच, योजना र लक्ष्य यहाँ अरुको देखासिकी र कसैको स्वार्थका लागि काम सुरु हुन्छ । देशको आवश्यकता हो कि हैन भन्ने बुझ्दै नबुझी अनि ती कामका लागि देशभित्र जनशक्ति छ कि छैन भन्ने हेर्दै नहेरी काम सुरु गर्दा आर्थिक नोक्सानी भैरहेको छ । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय हो– सवारी साधनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने इम्बास्ड नम्बर प्रणाली । केही वर्षयता सुरु भएको यो प्रणालीले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । तर, काम नगरे पनि भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा रहेको छ ।
सरकारले देशभरका पच्चीस लाख सवारी साधनमा त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान कार्य २०७४ भदौ ५ देखि शुरु भएको थियो । त्यसका लागि सरकारले काम शुरु गरेको करिब दुई वर्षअघि प्रक्रिया थालेको थियो । अमेरिकी संयुक्त उपक्रम रहेको बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग सम्झौता गरिएको थियो । कूल रु चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख बराबरको सम्झौता भए पनि हालसम्म मात्रै चार हजार ४०३ सवारी साधनमा मात्रै त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न भएको छ । त्यो भनेको कूल सवारी साधनमध्येको मात्रै शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत हो । तर, खरीदकर्तासँग गरिएको सम्झौताले काम नै नगरे पनि भुक्तानी दिनुपरेको छ ।
काम नै नगरी भुक्तानी दिने गरी सम्झौता किन गरियो ? यो संस्थागत भ्रष्टाचार हो कि हैन ? यसलाई सरकारले के भन्छ ? तोकिएको समयमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेले नगर्दा केही नगर्ने उल्टै भुक्तानी दिइरहनु भनेको ब्रह्मलुट बाहेक केही हैन । यस दिशातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान्थ्यो कि ?